Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2013 February 03
03 Febroary 2013
Aogositra 2020 14 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 03 Febroary 2013
Afrika Mainty03 Febroary 2013
Fisamborana sy fitazonana tsy ara-dalàna, fampijaliana, fitsarana tsy mandeha amin'ny fahamarinana, izany no hita taratra teo amin'ny tantaran'i Guinée. Noraisin'ny Fikambanana maro samihafa tao Guinée an-tanana ny resaka tsimatimanota izay anjakan'ireo mpitondra voaheloka tamin'ireo heloka bevava.
“Helo ho an'ny pelaka” i Tajikistan
Azia Afovoany sy Kaokazy03 Febroary 2013
Lohahevitra fady ny resaka pelaka ao Tajikistan. Na dia efa ho dimy amby folo taona aza izao no tsy mahavoasazy intsony ny fiarahan’ny mitovy fananahana ao amin’ity firenena, dia mbola vitsy ireo mahazaka ny fisian'izy ireo ao amin’ny fiaraha-monina mitandro ny fomban-drazana. Ankoatra ny fihetsika fankahalana pelaka, lasa lasibatry ny...
Mila Sitraka Amin'i Merkel i Morsi Kanefa Mbola Ao Anaty Korontana i Ejipta
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana03 Febroary 2013
Nalaza ny sary “photoshop”n'ny filoha Ejipsiana Mohammed Morsi nanoroka ny lehiben'ny mpitondra fanjakana (chancelier) alemana Angela Merkel, ka niteraka fanebahana teo amin'ireo mpiserasera, izay nitsikera an'i Morsi ho nandany andro nankany ivelany amin'ny fotoana anjakan'ny korontana ao amin'ny firenena. Tsy nandray ilay sary ho tena izy ny Ejipsiana tamin'ny aterineto,...
Ekoatera : Hatsikana Politika Mandritra ny Fampielezan-kevitra
Amerika Latina03 Febroary 2013
Hiatrika fifidianana filoha, filoha-lefitra ary mpikambana parlemantera i Ekoatera amin'ny 17 fabroary 2013 ka miaina hatsikana sy ny vazivazy ary ny fandoavana onitra vitsivitsy ny firenena
Koety: Mitokona Tsy Misakafo Ilay Mafàna Fo Tsy Manana Zom-Pirenena.
Nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina tao am-ponja ilay mpikatroka mafàna fo tsy manana zom-pirenena Abdulhakim AlFahdi, ny 16 Janoary teo, rehefa nandray ny saziny roa taona an-tranomaizina. Nampangain'ny fitsarana fa namely mpitandro filaminana iray tamin'ny hetsi-panoherana natao tamin'ny volana Marsa teo ity mafàna fo ity. Nolazain'ilay mpikatroka mafàna fo fa noforonina...